Koorsada Gargaarka Degdegga |Tukesomalism.com | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Turxaan Bixinta Nolosha Qoyska Waa Jibaadka Ninka
Online Master of Business Adminstration-MBA |Tukesomalism.com
Koorsada Gargaarka Degdegga |Tukesomalism.com
Sahal Issaakh — June 9, 2016
Waxaan doonayaa in aan bixiyo koorsada Gargaarka Degdegga, taas oo faa’iidooyin aan la soo koobi karin u leh qof walbaa. Waxaa qasab ah in qof kastaa uu la kulmi karo qof kale oo shil ama xunuun u baahan daryeel deg deg ah la il daran. Inta aanaan guda galin casharada koorsada waxaan jeclahay in aan idiin soo koobo hadafka laga leeyahay gargaarka deg dega.
In la dhawro noolasha qofka, la siiyo daaweeyn aasaasi ah si qofka uusan xumada ugu dhiman (Dhimasha Illaahay ayaa hayo balse dadaal ayaa loo baahanyahay).
In laga hortago in qofka miyir beelo.
In laga hortago in uu qofka dhibka gaaray noqon mid dhibaato weyn u geesta tusaale hadey jiraan Dhiig bax waa in la joojiyaa.
Lana hormariyo siduu qofka dhaqso ugu buskoon lahaa.
Haddaba waxaan qaadan doonaa mowluudhyada hoos ku xusan:
Noocyada Gargaarka Degdegga.
Sida loo asturo walxaha dhaawacyada iyo cudurada sababa.
Ogaanshaha waxyaabaha shilka ama cudurka sababay.
Qiimeynta Goobta uu shilka ka dhacay.
Stroke (Cudurka Maskasda ku dhaco).
Iyo mowdhuucyo kaloo xiiso badan oo aan jeclahay in aad la dhicidoontaan.
Next post Qofkii Aan Shilin Heysan Sharaf Looma Yeelayo, |Tukesomalism.com
Previous post Tiknoologiyada & Ganacsiga|Tukesomalism
November 4, 2017 at 11:21 am	— Reply
waa koorsoo muhiim ah wayna wanagsan tahay in la bartoo